होचो भएर चिन्तामा हुनुहुन्छ ? अप्नाउनुहोस् मात्र यी ५ उपाय – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/होचो भएर चिन्तामा हुनुहुन्छ ? अप्नाउनुहोस् मात्र यी ५ उपाय
उचाई बढाउन केके कुरामा ध्यान दिने ?** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण विकासका लागि सन्तुलित खानपान निकै आवश्यक हुन्छ । हरियो सब्जी, फल र प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेटले भरपुर खाना सन्तुलित मात्रामा लिनुपर्छ ।
यसले उचाई बढाउनका लागि हाम्रो शरीरमा ग्रोथ हर्मोन्सको स्राव हुन्छ । सबै किसिमको भिटामिन, प्रोटीन र बोसोयुक्त डाइट लिनाले यस्तो ग्रोथ हर्मोन निर्माण हुन्छ । सब्जीमा सलगम, पालुङ्गो, गोभी, गाजर, ब्रोकाउली खानाले उचाई बढाउन फाइदा गर्छ ।
दुधमा केहि किसिममा लाभकारी पोषक तत्व भरपुर हुन्छ । खासगरी दुधमा क्याल्सियम पाइन्छ, यसले हड्डी बढाउने काम गर्छ। यसका साथै दुधमा भिटामिन ए र प्रोटिन मिल्छ, जसले हाम्रो सम्पूर्ण विकास हुन्छ । नियमित दुई,तीन गिलास दुध पिउनुपर्छ । यसका साथै सोयाबीन, पनिर र दही पनि सेवन गर्दा उचाई बढ्ने गर्दछ।
घामको किरणबाट हामीलाई भिटामिन डी प्राप्त हुने गर्दछ। बिहानको समयमा, जतिबेला घाम रापिलो भएको हुँदैन त्यसबेला पैदल हिँड्ने गर्नुपर्छ । यसले हड्डी बलियो हुन्छ र लम्बाई पनि बढ्छ । भिटामिन डीयुक्त दुध, माछा, अन्डा, पनिर पनि सेवन गर्नुपर्छ ।